C/raxman Faroole oo ka shakisan odayaasha Muqdisho ku shiraya
Updated About:323 days ago 0
Madaxweynaha maamulka Puntland C/raxmaan Maxamud Faroole ayaa sheegay in uusan fahmi karin shirarka ay Muqdisho ku leeyihiin odayaasha dhaqanka oo uu ku sheegay in ay yihiin kuwo ka baxsan heshiisyadi roadmap-ka.
Faroole oo wareysi siiyey BBC-da ayaa kasoo horjeestay shirarkaas oo uu ku tilmaamay kuwo siyaasadeysan oo ay wadaan dad uu ku tilmaamay in ay yihiin murashaxiixn balse marki danbe uu ku sheegay madaxda sare ee dowlada.
“Waan garan la,ahay qudbadaha maalin walbaa loo sheego odayaasha ee aan idaacadaha ka maqlo, waqtigi wuu dhamaan rabaa waxaan Muqdisho ka socdana waa macna darro, madaxda dowlada maalin walba odayaashaasi ayey u qudbeynayaan mana ahan wax qeyb ka ahaa wixi aan kusoo heshiinay, hadii xaajadu sidaan kusii socotana arintu waxay noqon doontaa in 20-ka August la gaaro iyadoo aysan doorasho dhicin,” ayuu yiri.
Waxa uu ugu baaqay odayaasha dhaqanka in nin walba uu ku laabto deegaanka uu kasoo jeedo kadibna uu la tashado dadkiisa isla markaana uu soo magacaabo xildhibaan baarlamaanka u matali doona.
C/raxmaan Faroole oo ku caan baxay hadalo kulkulul ayaa sheegay in aysan aqbali doonin Puntland wax ka baxsan wixi lagu soo heshiiyey kulamadi Adis Ababa, London, Istanbul iyo Nairobi.
Waxgaradka Kismaayo oo eedeeyn usoo jeediyay Waxgaradka Muqdisho Dhageyso